လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည် ကုလားကုတ်ကျေးရွာ၌ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ - Yangon Media Group
လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည် ကုလားကုတ်ကျေးရွာ၌ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ
ရေး၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် ကုလားကုတ် ကျေးရွာ အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ၌ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က တိုက်ခတ်ခဲ့ သောလေပြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွား နေအိမ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါလေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကြောင့် နေအိမ် ၁၁၄ လုံး ပြိုကျ ပျက်စီးခြင်း၊ နေအိမ် ၂၈၂ လုံး အမိုးလန်ခြင်း၊ ယိုင်သွားခြင်းတို့ ကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၃၉၆ စုမှ လူဦးရေ ၁၉၂၃ ဦး လေဘေးသင့်ခဲ့ပြီး၊ အထက်တန်းကျောင်း အ ဆောင်သုံးဆောင် အမိုးလန်ခြင်း တို့ကြောင့် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းတို့မှ အချို့အတန်းများ ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပြီး၊ အရေးကြီးသောအချို့ အတန်းများကို စာသင်ချိန်ပြောင်း လဲပြီး သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
”လေဘေးသင့်တဲ့အတွက် ကျောင်းဆောင်တွေ ပြန်ပြင်နေရ တယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁၁ရက်ကစပြီး ဒသမတန်း၊ နဝမတန်း၊ စတုတ္ထ တန်းတွေကို ကောင်းတဲ့အဆောင် တွေမှာ အချိန်ပြောင်းပြီးသင်ပေး နေတယ်။ အဋ္ဌမတန်းကိုတော့ ဆ ရာမရဲ့အိမ်မှာ သင်ကြားပေးနေ တယ်။ ကျန်တဲ့အတန်းတွေကို ယာယီပိတ်ထားတယ်။ ဘေးအန္တ ရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနနဲ့ မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက ရှင်း လင်းရေးတွေ လုပ်ပေးနေတယ်”ဟု ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာထိန်လင်းက ပြောသည်။
လေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ငွေကျပ်သိန်း ၃ဝဝနှင့် ရေသန့်ဘူး၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်များ ထောက်ပံ့ ပေးပြီး၊ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ လူတစ်ဦးလျှင် ဆန်နှစ်ပတ်စာနှုန်းဖြင့် ငွေကျပ် ၄၂ဝဝစီ၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း ၁၁ မျိုးစီနှင့် ပြိုကျသည့်နေအိမ်တစ်လုံး ငွေကျပ် တစ်သိန်း၊ အမိုး လန်နေအိမ်တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝဝစီနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနမှ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကို တစ် ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၃ဝဝဝဝစီ ထောက် ပံ့ခဲ့သည်။
”တချို့အိမ်တွေကတော့ ပြန် ဆောက်နေကြပြီး တချို့အိမ်တွေ ကတော့ ပြန်မဆောက်ကြသေးဘူး။ ပြန်ဆောက်ဖို့ တိုက်တွန်းအားပေး နေရတယ်။ ရေးမြို့မှာ ကယ်ဆယ် ရေးစခန်းဖွင့်ပြီး အလှူခံနေတာ အလှူခံရသလောက်တော့ လာပေး နေတယ်”ဟု ရေးမြို့နယ် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးကံဝင်းက ပြောသည်။ အထက်တန်းကျောင်း၌ ယာယီပိတ်ထားသည့်အတန်းများကို ကျောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါ အချိန် ပိုသင်ကြားမှုများ သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြဝတီမြို့၌ ဆိုင်ကယ်တိုက်မှုကြောင့် ၁၄ဦးသေဆုံးပြီးနောက် ဆိုင်ကယ်စီး ဦ?
မြန်မာမိသားစုလေးဦး အသတ်ခံခဲ့ရသည့်နေရာ၌ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက တစ်လပြည့် ဆွမ်းသွတ် အမျှဝေ
ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိ အင်ဆစ်ဂနီကို အနားပေးရန် မစွမ်းသာခဲ့ကြောင်း နည်းပြ ဝန်ခံ
မြန်မာ – အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ် အသွားအလာ ပိတ်ထားမှုကြောင့် အရောင်းအဝယ် သမားများ အခက်ကြုံနေပြီး ကွ?
အဆိုတော် ဘိုရာက ယခုလအတွင်း အယ်လ်ဘမ်အသစ် ထွက်မည်ဟု ကြေညာ